ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Lafayette, ရေကန်ချားလ်စ်, LA ကလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း
ဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု New Orleans, ရုဂျြ, Shreveport, Lafayette LA က
အလုပ်အမှုဆောင်ခရီးသွားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း Lafayette, ရေကန်ချားလ်စ်, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီး Louisiana Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 855-434-0700 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုအပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်. ဒါဟာသင်အိမ်တွင်တစ်ဦး Harrow အတွေ့အကြုံကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုံ. သင် Acadiana Park ကသဘာဝတရားဘူတာနှင့် Lafayette ဝီဇီယားနားရှိအခြားခရီးသွားဧည့်အစက်အပြောက်ကသူတို့ကိုယူမယ်လို့သင့်မိသားစုကတိထားတော်ဖူး, ဒါပေမယ့်လေယာဉ်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဖို့မေ့လျော့.
သငျသညျငှါအဖြစ်ကြိုးစားပါ, ဒါပေမယ့်သင်ကနောက်ဆုံးယခုအချိန်တွင်စီးပွားဖြစ်ယာဉ်ပေါ်တွင်ထိုင်ခုံရတော့မှပါလိမ့်မယ်. ဤသူသည်သင်တို့သင်၏မယား၏အမျက်တော်နှင့်သင့်ဆိရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာစိတ်ပျက်လက်ပျက်၏ရူပရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုလိုပါ? သင်အမြဲသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုမှသင်နှင့်သင့်မိသားစုအင်္ဂါကို ယူ. ကြှနျုပျတို့၏ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှား Lafayette Louisiana လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှာငါတို့အပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်မစိုးရိမ်လိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့ပြန်လာခရီးစီစဉ်သည့်အခါအံ့သြဖွယ်အပေးအယူ Get. အများအပြားအခါသမယတွင်, we have to return to base with empty seats. This hurts our finances badly. In order to recoupapart of our expenses, we offer last minutes empty leg Aircraft deal Lafayette Louisiana. Grab hold of this opportunity to return home via our private air charter at unbelievable prices. This isawin-win situation for both of us. We manage to recoverapart of our expenses, and you have to pay less than the normal rate by availing of this service.
ဒါဟာသောကြာနေ့ညဦးယံ၌ငါဒီညများအတွက်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်ချင် ... သင်ကပူဇော်နိုင်ပါလိမ့်မည်? သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပင်ထိုကဲ့သို့သောအတိုအသိပေးစာမှာသင်တို့အဘို့ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပျံစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေလို့ရပါတယ်. ဤသူသည်သင်တို့အတွက်ငှားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပေါ်မှာထိုင်ခုံစာအုပ်ဆိုင်နိုင်သည်ကိုဆိုလို Lafayette Louisiana ထွက်ခွာသွားအချိန်မရောက်မှီအကျွန်တော်တို့ကိုနာရီစုံတွဲတစ်တွဲဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်. အဆိုပါအဆင်ပြေထိုင်ခုံ, တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများ, ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုအခမဲ့ခရီးသင်အမြဲသင့်ရဲ့အနာဂတ်ခရီးစဉ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်သေချာ, ထိုင်ခုံစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်လျှင်ပင်.
ထို့အပြင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်ကောင်တီအဖြစ်လူသိများလေကြောင်း Lafayette အတွက်ဂျက်လေယာဉ်ပျံလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကလေဆိပ်များစာရင်း
Lafayette, Scott, Carencro, Broussard, Youngsville, Duson, မီလ်တန်, Breaux တံတား, Cade, မောရစ်, နေဝင်, Cecilia, ဂရန်း Coteau, Arnaudville, စိန့် Martinville, Rayne, Leonville, ဘုရားကျောင်းပွိုင့်, Abbeville, နယူး Iberia, ဘဏ်ခွဲအ, Delcambre, Erath, Loreauville, Opelousas, Crowley, Lawtell, ဆိပ်ကမ်း Barre, Avery ကျွန်း, Krotz Springs, Kaplan, လုဒိ, ပယ်ရီ, Estherwood, ဝါရှင်တန်, Chataignier, Iota, Egan, Jeanerette, ဥနိ, Morse က, Lottie, Evangeline, Mermentau, maringouin, Palmetto, Lebeau, Fordoche, Rosedale, Gueydan, Melville, Livonia, Grosse Tete, Mamou, Ville Platte, Charenton, Basile, Baldwin, Jennings, Reddell, Erwinville, နက်ဖြန်နေ့, အော်စကာ, Morganza, ရော့, Franklin, Lakeland, Lake Arthur, Elton, Jarreau, Batchelor, Pine Prairie, Addis, Plaquemine, ဥယျာဉ်ကိုစီးတီး, Brusly, Dupont, Rougon, New Roads, Centerville, Port Allen, Ventress, အမြဲစိမ်း, Bunkie, Glynn, Innis, Welsh, Saint Landry, Plaucheville, Turkey Creek, Lettsworth, ရုဂျြ, White Castle, Sunshine, Oberlin, Simmesport, Cottonport, Pierre Part, Kinder, Lacassine, Saint Gabriel, ဟမ်းဘတ်, Fenton, Hayes, Oakdale, Angola, Carville, ပက်, Cheneyville, Tunica အဘိဓါန်, မုန့်ဖုတ်သမား, Moreauville, Saint Francisville, Belle Rose, Mansura, Hessmer, အိုင်အိုဝါ, Paincourtville, Zachary, Weyanoke, Berwick, Geismar, Leblanc, Donaldsonville, Morgan City, Plattenville, Grand Chenier, Bell City, ပဲ့တင်သံ, Mittie, မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်, Wakefield, Marksville, Napoleonville, Darrow, Slaughter, Longleaf, Reeves, Prairieville, အဲလစ်ဇဘက်, Forest Hill, Glenmora, Gonzales, Denham Springs, Lecompte, Dry Creek, Greenwell Springs, Brittany, Duplessis, Amelia, Ethel, Pride, Burnside, Creole, Bordelonville, Ruby, ရေကန်ချားလ်စ်, ဂရန်, Effie, Labadieville, Sorrento, Ragley, Convent, စိန့်ဂျိမ်း, Donner, Woodworth, Watson, Saint Amant, Center Point, Sugartown, Acme, French Settlement, Wilson က, Walker, Woodville, Gibson, Uncle Sam, တလြှောကျ, Hester, အာလေဇန္, Westlake, Norwood, Livingston, Elmer, Maurepas, ကလင်တန်, Hineston, Paulina, Thibodaux, Libuse, Longville, Schriever, Otis, Pineville, Pine Grove, Centerville, Sieper, မီးခိုးရောင်, Gardner, Boyce, Deridder, Greensburg, Houma, Rosepine, Crosby သည်, Gloster, ဝိန်း Fort Polk, Simpson, Slagle, Theriot, Leesville, လွတ်လပ်ခြင်း, Newllano, Kurthwood, http://lftairport.com/
Lafayette အတွက်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာ, ရေကန်ချားလ်စ်, Louisiana ထိပ်တန်းညပွဲလမ်း, ငါ၏အဧရိယာတဝိုက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း